महिला अहिले नजागे कहिले जाग्ने ?
महिलाहरू धार्मिक कार्यमा बिशेष सहभागिता जनाउंछन् । हरेक मठमन्दिर, महायज्ञ, तथा धार्मिक क्षेत्रमा बढी नै सहभागिता जनाईरहका हुन्छन् । धार्मिक आस्था बोकेर पारिवारिक सुखशान्ती,धन आर्जन,प्रगतीको लागि उनीहरू बिशेष गरी यस्ता कार्यमा सहभागिता जनाउन जान्छन् । हरेक धर्ममा प्रमुख गुरूहरू प्राय पुरूष नै हुन्छन् ।
हाम्रा धार्मिक शास्त्र र त्यसलाई ब्याख्या गर्ने गुरूहरूले प्राय यस संसारमा हुने पापको भारी सबै महिलालाई नै बोकाएका छन् । महिलाले ब्रत बसे पुरूषको आयु बढ्ने, उनीहरूको श्रृंगारले पुरूषको आयुमा बृद्धि, प्रगति हुन्छ भन्ने बिश्वासका साथ सोह्रश्रृगांर गरी ब्रत बस्छन् । लोग्नेको आयु बढाउन लोग्नेका खुट्टाको जल खानु,लोग्नेले पानी खुवाएपछी ब्रत तोड्नु परम्परा बनेको छ तर आजसम्म पत्नीको सुस्वाथ्य, लामो आयुको लागि कोहि पनि पुरूष ब्रत बस्न परेको छैन । यदि लोग्नेको आयु स्वास्नी ब्रत बसेर बढ्छ भने स्वास्नीको आयुको लागि पनि त लोग्ने ब्रत बस्नु पर्ने होइन र ?
स्वस्थानी ब्रत कथामा उल्लेख गरिए अनुसार स्वास्नीले एक्लै खाए कुकुर्नी हुन्छे, झगडा गरे कुलटा हुन्छे, डेरा आंखाले हेरे डेरी हुन्छे । ऋषिपन्चमी कथामा पनि ब्यापक रूपमा पाप जति महिलालाई बोकाइएको छ । रजस्वलाको बेला छोइएको, सूर्य देखेको, पृथ्वीमा हिंडेको पाप कटानी सप्त ऋषिको पूजा गरेर गरीन्छ ।
शरीरको बिकार फाल्दा पनि पाप लाग्ने भय पछी पुरूषले फालेको बिकारको पाप पुरूषलाई किन लाग्दैन ?
महिलाले जति पाप गर्छे त्यसका कारण उसको स्वर्गको बाटो रोकिन्छ साथसाथै पूरै परिवारको पनि । यही ब्याख्या गर्ने पुरूष महन्तहरू आजकल आफ्नो सुख र बिकार फाल्नका लागि महिला, बालिका बलात्कार गर्छन ? जुन कुरा शास्त्रमा बर्जित गरिएको छ भनेर प्रवचन दिन्छन् त्यहि काम तिनै गुरूहरू किन गर्छन् ? भारतमा आशाराम बापु लगायत अन्य नाम चलेका गुरूहरू समेत यौनहिंसामा किन सहभागी भए ? हामीले बुझ्नु पर्ने होइन र ?
नेपालमा पनि बिभिन्न धार्मिक गुरूले महिलालाई आफ्नो यौन शिकार गर्न पछी परेका छैनन् । दिक्षा दिने, आफ्नो परम अनुयायी बनाउन बिभिन्न काल्पनिक लोभमा फसाउन माहिर गुरूहरूले उनै आफ्ना अनुयायी महिलालाई आफ्नो शिकार बनाइरहेका छन् ।
कलियुगका श्रीकृष्ण बनेर प्रवचन दिने तिनै गुरूले आफ्नो पाउको जल खुवाएर महिलालाई अधिन पारेका घटना मेरै आँखाले देखेको छ । धार्मिक गुरूले आफू यति ठूलो सन्त बन्नुको रहस्य बताउंछन् कि उनले काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडेर नै यो सफलता प्राप्त गरेका हुन् । अब यी शब्दहरूको अर्थ कसरी लगाउने ? जहां सम्पत्ति अथाह कमाएका छन् । महिला अनुयायीसंग रासलिला मच्चाएकै छन् ।
महिलालाई सन्तान सुखको लागि बिभिन्न बुटी दिने, एक्लै आफ्नो निवासमा राती राती सेवा गर्न बोलाउने अनि सन्तान प्रदान गर्ने, कस्ता सन्त ?
सन्तानका लागि तिनै बाबाहरूको लिंग दर्शन गर्ने हाम्रो कस्तो बिश्वास हो ? सन्तान उत्पादन गर्न फूकेर या बुटी लगाएर,बाबाको लिंग दर्शन गरेर हुंदैन भन्ने कुरा कहिले बुझ्ने हो ? पुरूषको शुक्रकिट र महिलाको डिम्बको मिलन बिना सन्तान कसैको आशिरवादले बन्ने होइन भन्ने थाहा नभयर हो या बाबाको आशिर्वादले चटसे सन्तान गर्भमा बस्छ भन्ने कुरामा बिश्वास गरेर हो । महिलाहरू यसकारण पनि यस्ता बाबाहरूबाट निरन्तर बलात्कृत भैरहेका छन् । यसरी बलात्कृत हुनु या बाबाको यौनदासी हुनु उनीहरूको निजी स्वार्थ पनि हुन्छ ।बाबाले धर्मको दुहाई दिन्छन् भने महिला स्वर्ग जाने, सन्तान, प्राप्त गर्ने, बाबाको नजिककी सुसारे बन्ने, त्यसैबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने तथा सिधै स्वर्गको बाटो तय हुने लालचले यौनदासी बनिदिन्छन् ।
जुन बाबाले पति प्रतिको बिश्वासघात महापाप हो, पति बाहेक परपुरूषको मुख हेर्नुधर्मले दिंदैन त्यस्ता पत्नीहरुका कारण पतिको सर्वनाश हुन्छ भनेर घोक्रो फूलाई फूलाई प्रवचन दिन्छन्, तिनै धार्मिक गुरूले ती महिलासँग यौनसम्पर्क गर्दा धर्मको बाटो खोलीदिएको अर्थ लगाउँछन् ।
अब पनि सचेत नभए कहिले सचेत हुने हो महिला ?
धर्ममा आथा राख्नु पर्छ । किनकी अनुशासनमा रहने एउटा महत्वपूर्ण कडी हो धर्म । अरू कसैसंग नडराएको मान्छे धर्मसंग डराउंछ । धर्मशास्त्रमा धेरै सकारात्मक कुराहरू उल्लेख छन् । हामीले ती सकारात्मक कुराहरू अबलम्वन नगरेर केहि मानिसले बनाएका रूढिवादी परम्परामा किन अल्झिने ? जहाँ स्त्री र पुरूषलाई दुई तहमा हेरिन्छ । स्त्री पुरूष एक रथका दुई पांग्रा हुन् भनेर ब्याख्या पनि गर्ने, जिम्मेवारी बोकाउने तर उ बाट भयका कमिकमजोरीहरूलाई पापको नाममा भारी बोकाउने । यस्ता ब्याख्याताहरूसँग सजग हुन र जोगिन जरूरी छ ।
हे स्त्रीहरू धार्मिक प्रवचन सुन तर सहि गलत छुट्याउ । सहीको अनुशरण गर तर गलत ब्याख्यालाई स्वर्ग तर्ने बाटो नसम्झ ।
सन्तान जन्माउन स्त्री पुरूषको बराबर आवस्यकता हुन्छ । पुरूषको शुक्रकिट र महिलाको डिम्बको मिलन पछि मात्र सन्तान बन्छ, न कि नागा बाबाको लिंग दर्शन गरेर ।अब त अलि चेत । महिलाले सन्तानको लागि बाबाका कुटी धाउने हैन । सृष्टिका सारा प्राणी एकै हुन् भगवानका लागि कुनै नजिक पर छैनन् । त्यसैले त्यो पापको भारी आफ्नो थाप्लोमा मात्रै नथाप ।
हे महिला यो कलियुग हो, सत्ययुग होइन । यहाँ भगवानको नाम भजाएर सन्तुष्टी लुट्नेको कमि छैन ।त्यसैले सचेत बन ।आफूलाई चिन । आफूलाई कमजोर ठानेर ढोंगी बाबाहरूको पोल्टामा आत्मसमर्पण नगर । किनकी उनीहरू तिम्रो शरीर चाहान्छन् । केही त बुझ ।
महिला सबै असल र पुरूष सबै गलत भन्दिन म । कतिपय महिलाहरू आफ्नो निजी स्वार्थका लागी, रमाइलो गर्ने, आफ्ना यौन चाहना पूरा गर्ने हेतुले ती गुरू र बाबाहरूसँग सम्पर्कमा जाने र माग अनुसार नभय बाहिर कुरा छताछुल्ल पार्ने पनि हुन्छन् ।
म धर्म बिरोधी होइन तर धर्मको नाममा गरिने महिला शोषणको बिरोध गर्छु । प्रत्येक महिलाले आफूमाथिको शोषणमा सजग हुनैपर्छ । जय होस् ।